ukusekela: uMartin Vrijland
ahanjiswe IZINDABA IZIMPENDULO	by UMartin Vrijland	ngo-14 February 2017	• 10 Amazwana
Ababolekisi baseGreki bahlangana kuleli sonto e-Athene ukuhlola ukuthi iGrisi ihlangabezana nezimfuneko zokuguqula izinto eziyingxenye yezokuthuthwa kwezimali zakamuva. Phakathi kuka-2015 noJuni 2018, iGrisi izothola isikweletu ngemali engama-86 billion, uma ngabe izinguquko zenziwa. Ngaphambi kwalokho, izikweletu ze-110 billion kanye [...]
Amaviki wokuhlukumeza ngesiFulentshi amaphephandaba e-Dutch silence ukufa
ahanjiswe IZINDABA IZIMPENDULO	by UMartin Vrijland	ku-26 May 2016	• 7 Amazwana
Kwaphela amasonto, izimpikiswano ezinamandla kakhulu eFrance ziye zaqhubeka kumongo wezinguquko zomthetho wezabasebenzi. Le mibhikisho yenzeka ngaphansi kwegama elithi 'Nuit Debout' (Night Revolt). Lapho amaDutch ahamba khona ekhaya ngemuva kwebhubhu aphinda aphinde aphinde aphinde aphulwe elinye, amaFulentshi amasonto amaningi [...]
Ukuphela kokubika okuzimele
ahanjiswe IZINDABA IZIMPENDULO	by UMartin Vrijland	ngo-19 February 2016	• 6 Amazwana
Iminyaka eminingi, uMartin Vrijland ugxile ekubhaliwe kokubhala ngezindaba. Ngokuyinhloko icala lika-Anass laliyiphenyo elenza uthuli oluningi, ngoba kwacaca ukuthi lokhu kubulala kwakukufana nokubulala nokufihla. Eminyakeni yamuva kube khona izenzakalo eziningi [...]
I-monopoly yama-media staggers ajwayelekile, uyahamba
ahanjiswe IZINDABA IZIMPENDULO	by UMartin Vrijland	ngo-23 November 2015	• 23 Amazwana
Iningi labantu lizolibona. Vuka ekuseni njengoba ukhululekile ngangokunokwenzeka. Ukudla kwasekuseni, ikhofi yekhofi noma itiye futhi mhlawumbe ngisho nokukhululekile ukubukela izindaba noma ukuvula umsakazo ukuzwa izindaba zakamuva. Abanye bangase bafunde iphephandaba ngokuthula. Omunye umuntu angase afunde izindaba ze-intanethi njengekhululekile njengangaphambili. Yeka indlela okumnandi ngayo [...]
I-Turkey iphayona lika-Islamic State elinethemba lokubuyisela uMbuso wase-Ottoman
ahanjiswe IZINDABA IZIMPENDULO	by UMartin Vrijland	ngo-7 Okthoba 2015	• 20 Amazwana
Uyazi ukuthi i-Turkey ibeke amapayipi ezindaweni eziqotshwe yi-ISIS enyakatho yeSiriya ukuze zenze ama-dollar ayi-800 ngamafutha? Yiqiniso, njengezwe ngeke nje wenze ibhizinisi nge-ISIS futhi awekho amapayipi ambalwa nje wamafutha. Lokhu kusho okuningi mayelana nobuhlobo phakathi kwamaSulumane [...]
Kungani uhlelo lwemali luyinkambo yesigqila kanye nendlela iGrisi yaba ngayo
ahanjiswe IZINDABA IZIMPENDULO	by UMartin Vrijland	ngo-14 Julayi 2015	• 9 Amazwana
Ezinsukwini ezimbalwa ezedlule, izigidigidi zibuye zibuyele ezindabeni mayelana neGreece. Akukhona neze intambo yokubopha. AmaGreki athole enye i-86 billion izolo, kodwa ngaphambili i-110 billion kanye ne-130 billion nayo yanikezwa. Ngichaza ukuthi kuphi okukhulunywa khona [...]
Inkulumo entsha kaGeorge Orwell lapho ekhuluma 'ngokusekela eGrisi'
ahanjiswe IZINDABA IZIMPENDULO	by UMartin Vrijland	ngo-9 Julayi 2015	• 14 Amazwana
Emasontweni amuva nje, i-Main Stream Media isisindise ngezinkinga eGrisi. Esihlokweni sami sangaphambilini, ngachaza indlela ukungena kwesiGreki akuhlangene ngayo nesiGreki esibucayi noma 'esiphila', kodwa sinakho konke okuphathelene nokuhlaselwa kweYurophu ngesiGreki [...]
Ukubulawa kwezezimali zesiGreki kweYurophu
ahanjiswe IZINDABA IZIMPENDULO	by UMartin Vrijland	ngo-6 Julayi 2015	• 15 Amazwana
Awukwazi ukubona noma yikuphi ukuhlaziywa kwezindaba okwesikhashana, kepha izindaba zezinkinga zezimali zesiGreki ziyamangalisa kangangokuthi akunakwenzeka ukusho lutho ngalokhu. Isihloko sami sokuqala sasiphathelene nenkinga yezomnotho yamaGreki (bheka lapha). Kulo ngichaza ukuthi ibhange lokutshalomali laseMelika i-Goldman Sachs lohulumeni waseGrisi [...]
Ukuvakashelwa okuphelele: 15.894.370
Ikhamera ye-2 op Ngabe uhlelo lokulwa nezindiza e-Iranian olwehlise iBoeing 737-800 (indiza ye-PS752) lukhishwe?